ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက်”
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက်”
Posted by student on Mar 7, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
“ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
စိန်စီသောည မှ အဆက်”————————————–
စာရှုသူ ပရိသတ်ကြီး မှတ်မိပေဦးမည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ့ သမီးတော်လေး၏ မင်္ဂလာပွဲ-“စိန်စီသောည” ဗွီဒီယိုအခွေမှ စိန်တို့သည် ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု၏ မြစ်ဖျားခံရာတို့ပေတည်း။
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁ (YPI) – ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ ကျန်ရစ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား သေဆုံးခဲ့သူများ၏ဆွေမျိုးရင်းသူ နှစ်ဦးကို မကြာမီက ခွဲဝေပေးလိုက်ပြီဟု ၄င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူ တဦးကပြောသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းမှာ မတွေ့မိပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မတ်လမှာ တင်ထားတဲ့သတင်း ဖြစ်ဖို့များတယ်။ ရက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါ… အဲဒီလူသတ်မှုက ဒီလိုနဲ့ပဲ ပျောက်သွားမဲ့သဘောရှိတယ်… ဒီကောင်တွေ သက်ဆိုးရှည်သမျှပေါ့လေ..။
ပြောနေကြာပါတယ်ဗျာ။အဲတရားခံကို ဘယ်သူဆိုတာကိုသိလျှက်နဲ့ 
တနေ့ တော့ အားလုံးတရားစီရင်နိုင်မှာပါ။
ဆာပုလင်းကိုနှင်းမေါင်၊ စနေမေါင်မေါင်၊ ကိုမိုးသီး၊ ကိုသေတ္တာ နှင့် ဦးဂွမ်တီး တို့ သာရှိရင်
ဒီလို အမှု့မျိုးကို ဘယ်နေလိမ့်မှာတုန်း။
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစိ တောင်ကြီးပဲလှော် မဟာ့မဟာအကျော် မဟာရာဇာ အံစာတုံး ဆိုတာတော့ ရှိသကွဲ့ …..
သဂျီးက နယ်ပို့ထားလို့ ကိုယ့်လူရေ …
နို့မဟုတ်လို့ကတော့ ဟင်း … ဘယ်တောင်မှ မမှုဘူး … သေသွားမယ် ..
အဲဒီရေးထားတာတွေလောက် လုပ်ပုံနည်းတွေက.. တုံး,အ မယ်မထင်မိဘူး..
အသိမမှားရင်.. ကိုသုဇော်အဖိုးက.. ဦးသန်းရွှေအထက်ရာထူးလောက်မှာရှိခဲ့တာ..။
မောင် student ရေ ရှင်းပါအုံး။ပို့ စ်တင်ပြီးပျောက်နေလို့ ။
ဘယ်လိုလို့ ပေါ်မလဲဗျာ… စိန်စီသော အမှုဖြစ်နေတာကို. . .
မြန်မာ့တပ်မတော်ထဲ.. စီနီယာအဆင့်ကို ပြောတာပါ..။
သမ္မတကြီးက ဖြေရှင်း ပေးမည်။ မကောင်းသူ ပါယ် ကောင်းသူကယ်မည်။
တရားစီရင်ရေးစနစ် သန့်ရှင်းမှန်ကန် စေရမည်မှာ မုချ အမှန်အကန်ပါပေတည်း။
တရားခံ ဘယ်သူဆိုတာ အားလုံးသိတယ် ……. တောက်
အောင်ဇော်ရဲမြင့်နှင့် မောင်ဝိတ်တို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုမဟုတ် လက်နက်မှုဖြစ်ချေ၏
မိုးကုတ်ဦးမြမောင်ကို ဆရာသော်တာဆွေ စာအုပ်များတွင် ဖတ်ဖူး၏
စိန်သည် အန္တရာယ်ရှိ၏ သိပ်များများမဖော်လို။အထက်တန်းလွှာများ သေသထက်သေ လောဘဇောတိုက်ကြကုန် တို့သာမာန်လူများနှင့်မဆိုင် ပိုသေလေ အရင်းရှင်ခေတ်ပျောက်လေ ၀မ်းသာ၏
အိမ်မှာတော့ ဒညင်းသီးဆားရည်စိမ်တွေရှိသကွဲ့…………မဖြစ်ချေဘူး စိမ်ကြောင့်တော့အသေမခံနိုင်ဘူး အကုန်ရောင်းပစ်မယ်……..ဈေးထဲသွားပီး……….